Qodobo maanta laga soo saaray shirkii golaha wasiiradda ee xukuumadda Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Qodobo maanta laga soo saaray shirkii golaha wasiiradda ee xukuumadda Soomaaliya
Golaha wasiiradda ee xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay ra’iisul wasaaraha xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyr.
Kullankaasi ayaa arrimaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga, dardar-gelinta qorshaha 90ka maalmood, imtixaanada dugisyada sare, shirka London, billicda caasimada iyo arrimo kale.
Golaha wasiirada ayaa marka hore warbixin ka dhageystay wasiirka amniga oo sheegay in la bilaabay dhaqan-gelinta go’aanadii ay horey golaha wasiirada u gaareen ee qorshaha amniga Muqdisho oo ciidankii isku-dhafka ahaa la xareeyay, tababarna u socdo dhawaana bilaabi doonaan howlgalka sugida amniga, sidoo kale.
Wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in in maamulka gobolka Banaadir uu bilaabay amarkii ahaa inaan baabuurta la dhiganin wadada Makka Al-Mukarama, isagoona dhinaca kale tilmaamay in hay’adaha amniga ay ku guuleysteen inay ka-hortagaan labo baabuur oo qarax siday, ayna weli socdaan dadaalo lagu baacsanaayo kooxaha falalka amni-darro ka dhex-fuliya bulshada dhexdooda.
Dhinaca kale, wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa laga dhageystay warbixin ku aadan xuskii maalinta dhalinyarada iyo aasaaska SYL ee 15ka May, waxeyna sheegtay in xafladu si heer sare ah u dhacday, taasoo dhiiri-gelin weyn u noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wasiirada ayaa u mahadcelisey dhammaan intii suurto-gelisay in xafladu u dhacdo sidii loogu talo-galay.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa hoosta ka xariiqay muhiimada diyaarinta sharciyada muhiimka u ah dowlad wanaaga iyo sidii ay xukuumadu u gudan laheyd waajibaadka loo igmaday.
Wasiirada ayaa ka warbixiyay sharciyada ay diyaariyeen oo dhawaan golaha wasiirada la horgeyn doono.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed ayaa golaha uga warbixiyay go’aanadii kasoo baxay shirka London ee 11kii May 2017 iyo baahida deg-dega ah ee loogu baahanyahay in dabagal joogta ah lagu sameeyo dhaqan-gelinta go’aanadaas.
Golaha ayaa u mahad-celiyey dowladda UK oo shirkaas soo abaabushay, iyadoo shirku uu ahaa mid ay Soomaali la tagtey ajandaha iyo qoryshaha amniga, dhaqaalaha iyo siyaasada.
Wasiirada arrimaha dibadda, gaashaandhiga iyo kan ganacsiga ayaa sidoo kale laga dhageystay warbixino la xiriiro shirarkii gaar-gaarka ahaa ee London ka dhacay inta uu shirka socday.
Shirka London ayaa aad uga duwanaa shirarkii hore oo madaxweynaha Soomaaaliya Mudane Farmaajo iyo wafdigii uu hoggaaminayey oo cod iyo aragti mideysan ku tagay shirka, taas oo caalamku aad u ammaanay.
Shirkaas ayaa waxaa lagu heshiiyay in Soomaaliya iyo caalamka ay wada fuliyaan go’aanada kasoo baxayo iyadoo la isla xisaabtamayo.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Daahir Cismaan ayaa warbixin ka siiyay golaha wasiirada ku aadan imtixaanka dugsiyada sare oo maalinta sabtiga 20ka May ka bilaaban doona 77 xarumood ee dowlad goboleedyada GalMudug, HirShabeele, Koonfur-Galbeed, Jubbaland iyo caasimada Muqdisho ee gobolka Banadir oo 23,000 arday ay u fariisanayaan imtixaanaadkaas.
Ugu danbeyntii, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ka warbixiyey muhiimada nadaafada, sheegeyna in loo baahan yahay mas’uuliyiinta dalka inay door hoggaamineed ka qaateen si bulshada loogu horseedo inay bilicda dalkooda hagaajistaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre, wasiirada iyo dhammaan mas’uuliyiinta dalka inay waqtigooda u hurayaan inay waddooyinka nadiifiyaan bishiiba hal jeer.
Sidoo kale, golaha wasiirada ayaa u mahad-celiyey guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo la yimid hindise cusub ee ku saabsan soo celinta bilicda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.